Kiosk kafe barista Robot tsara indrindra miaraka amin'ny mpanamboatra kafe mitete sy orinasa | Moton
Laharana modely: MCF031A
Robot barista kafe kiosk amin'ny mitete kafe MCF031A dia tena fitaovana amin'ny malaza an-trano fiaraha-miasa robot sandry, Australian semi-automatique milina kafe, Italiana kafe grinder-doser, Holandy coffer tezitra sy italiana ranomandry dispenser. Ny vatan'ny kiosk dia mampiasa ny rafitra vy miaraka amin'ny fitaovana Q235B. Izy io dia manome fomba fifandraisana tambajotra telo, dia ny 4G, WIFI ary Ethernet. Ny varavarankely dia azo sokafana amin'ny tanana mba hamenoana ny fitaovana. Ilaina ny rano amin'ny paompy sy ny fanarian-drano. Ny famenoana fitaovana dia natao indroa isan'andro. Ny nosy ho an'ny famandrihana dia natao misaraka mba hahatonga ny habaka ho faritra tsy miankina.
Ny fiasan'ny kiosk kafe robot barista misy kafe mitete MCF031A
• Fanamboarana kafe mandeha ho azy amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana robot miaraka amin'ny fomba fanaovana kafe roa samy hafa (machine semi-kafe sy sivana kafe mitete).
• Fanontam-pirinty kafe
• Fifandraisana amin'ny fahitana sy fifandraisana amin'ny feo.
• Satan'ny fitaovana anatiny Kiosk fanaraha-maso sy fanairana fahadisoana.
• fandoavam-bola NFC
Hery napetraka 24Kw
refy (WxHxD) 5000x2400x1800mm
milina kafe Aremde
Sandry robotika JAKA Zu 3 sy JAKA Zu 7
Fotoana fanaovana fisotroana antonony 100 segondra
Fomba famandrihana Famandrihana ecran fikasihana eny an-toerana na famandrihana app amin'ny Internet.
Fomba fandoavam-bola Fandoavana NFC (Visa, Mastercard, Google Pay, Samsung Pay, PayPal)
● Teknolojia sy lamaody
● tsiro kafe maromaro
● Fomba fanamboarana kafe maro.
● tsiro kafe avo lenta
● Kafe tsara kalitao
teo aloha: Robot Receptionist amin'ny lamaody sy mora
Manaraka: Kiosk kafe Barista vaovao namboarina
Sinoa Barista Robot
Robotic Barista Price